Ogaden News Agency (ONA) – Garnaqsi (WADAADKA WEECDOOW – MUJAAHIDKII S/GALBEEDOOW)
Garnaqsi (WADAADKA WEECDOOW – MUJAAHIDKII S/GALBEEDOOW)
Maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo kala cadaanaya xaqqa iyo baadilka, siduu Ilaahay Qura’aankiisa ku sheegayna waxaa hadhaya un xaqqa baadilkana waa sida qaaqada uu hirka kolba meel u wado oo raandhiis ma leh.
Maqaalkan xiisaha leh (ka Akriso isagoo dhamaystiran qaybta hoose ee maqaalada), wuxuu qoraaga kula garamayaa Ibraahim dheere wiilashii uu yidhi jihaada ee sidaa ama ku naf waayay ama ku naafoobay iyo agoonta iyo dumarka la seegseegaya. Wuxuu yidhi qoraaga; (Wadaadka weecoodoow, Mujaahidikii S/galbeedoow, meeye halyeeyadii Habeenkii Halooye? Qaa’iddadii maalinkii Qorro? Kun ka roonayaashii hawlgalkii Kabtinaag? Geesiyaashii Yeed? Meeye raggii Saliid galay? Maxsuulka laga dhaxlay dhiiggii iyo dhaawicii iyo agoontii Halyeeyada ma waxaa lagu baddashay in umadda maanta qaaciddadii fircooniga ahayd “Kala qaybi oo xukun” loogu lug xidho Melez? Sow Melez ma odhan reer hebel baa ila dagaalama, reer hebelna waa ila heshiis, reer hebelna ismaba naqaan?)
Waaxaa kaloo ka mid ah dambiyada uu sheegay qoraaga inuu Ibraahim ka galay shacabka reer Ogadenya inuu ka dambeeyay isku dirkii shacabka iyo inuu ku tilmaami jiray JWXO inay yihiin gaalo oo la laayo taasoo keentay sida uu yidhi qoraaga in qaar badan oo iyaga ah la dilo ama cadawga loo loogo.
Dambiyada Ibraahim dheere uu ka galay shacabka Somaliyeed gees ilaa gees laguma soo koobi karo hal qormo, waxaana hubaal ah inay kolba iman doonaan qaar wax ka qora sidii qraagii aan horey uga soo boganay maqaaladiisa ee Yaasiin Garaad.
Maqaalkii oo dhamaystiran:
Waan ku salaamay wadaadka weecdoow, mujaahidkii S/galbeedoow, aad isuma naqaan balse ku bidhaansaday dhawr jeer. Waxaa iigu kaa danbaysay adoo jirri ugu yeedha midka qaadka cuna, mujrim ugu yeedha midka sigaarka caba, Daaquutna ku naanaysa walaalka kale ee degta qorigu u saaran yahay loolankana kula jira hagardaamada gumaysiga. Dooddaadu waxay ahayd mid adag, weedhaadu waxay xambaarsanayd aqwaal aad ka soo minguurisay culimo halganka & fikirka ay xambaarsanaayeen ay umaddu ku diirsatay. Tolow maanta yaad daliishataa?
Muxaadaraadka aad iclaamiso, siirada aad soo bandhigto, sooyaalka Axmed Guray sida aad ugu ladhi jirtay midkii Ina Cabdille Xassan eed ku sar-goyn jirtay waaqica maanta jira, adoo hal-kudheggaagu ahaa “Amxaar maan wax gala ma lahee maskax ay xabadi gashuu leeyahay” waxay ahayd barisamaadkii safafka rugta muxaadaraadkaasi ay isa soo tubi jireen muslimaadka dulman sida hooyo agoon looga tagay, aabe raxan rajo ah ciil ku korinaya, halgame xubnihiisa ku waayey hawshaad galiseen, caruur idin bidhaansanaysa, mustaqbalkana ku taamaysa inay booskiina galaan, qurbaawi waqtigu kaga dhamaaday galbeedka, yaqiinsanna inuusan cag saari Karin caradiisa hooyo isagoon u hogaasamin gumaysiga.
Waxaa intaa dheer bulshada u qaaraan-ururisa ehelkooda halganka xaqa ah kula jira taliska xoogga ku haysta, waxaad ku il-duufin jirtay fiqi qaloocan, axkaam sayn go’an iyo adilooyin garab marsan sunanka eebe ku maamulo kawnkan. Waxaad taad adeerka u ahayd ku tidhi “ Naa hooy joog shilimaadkaaga yaan qaad lagu cunine” . gabadha ka madax adaygta lug-gooyadaadana waxaad ku qeexday “Malcuumad”. Walaalka galinna u xamaasha qoyskiisa, galinka kalena shirar ku dajiya khiddada lagu fashilin lahaa cadawga soo socda tabihiisa, bulshadiisa uga nasteexeeya khayaamooyinka gumaysiga, ee mudaharaad iyo sawaxan kala horyimaada u adeegayaasha tigreega ee kuraasta wasiirnimo ku qaatay dhiigga umadda iyo moora-duugga qadiyaddooda xaqa ahna waxaad isaga dhigtay inaad furaha fardawsa adigu u hayso!
Dood-walaalnimo, xaqa aayao-ka tashi iyo dalab wehel-halgannimo ah kolkaan kuula imidna waxaad I tidhi “sheekh xaqa & baadilku meel ma wada galaan”. Xaqa qeexiddiisa waxaad ku soo koobtay surwaal la gaabsado iyo gadh lala baxaa? Hadday sidaa tahay, hadde qof walbana surwaalkuu manqas hosta kaga qaban, gadhkana xiiri mayo. Baadilka qeexiddiisuse ma jaa’ifaynta wehelkaaga halgan baa? Ma aflagaadaynta walaasha caruurteeda aan ka fikirine umaddeeda, masiirkeeda iyo halganka aan laga xigin shilinka u ururisaa? Anigu middaasaan kugu raacay, waadse i lug goysay!
Mujaahidkii S/galbeedoow, wadaadka weecdoow, markaan dhex jibaaxayo Moolasha magaaloyinkayga, qaybta muxaadaraadka, waxay dhagahaygu soo jiidan jireen sida aad aayaadka iyo halganka isu qabadsiiso, sida nusuusta iyo nashaadka gobolka yaala aad isugu rakibto, sida aad sooyaalkayga taariikheed iyo masiirka aan u dagaalamayo aad isugu qurxin jirtay. Waxaan dan iyo diin mooday inaan JWXO la diriro, waxaan u qalab qaatay inaan sumcad dilo, waxaan u tafaxaytay inaan qaaraan la siiyo aan xaaraantinimeeyo!
Wadaadka weecdoow, Ma xusuusataa war-saxaafadeedkaad soo ridday jeer hore, eed tidhi “Xog ku saabsan Ina Cumar Cismaan oo Dh/buur kula shiraya Gaagaabta”. Makaroofanaan qaadanay bulshadaan u daabacnay, iska qabta JWXO ayaan ku nidhi, way idin hagardaamaynayaan, himiladiinii sare ayey iibsanayaan, wa kaa magaaladii Dh/buur lagu wada dab-shidanayo! (Tolow xaggay naga martay aayaddii ahayd “Hubsada warka faasiqiintu idiin keenaan”). Ileen waxaad ku eedaynayseen idinkaa ku idlaa? Surwaalka gaaban baa na khalday, gadhka dheer baanu raacnaye xaqiiq ma aanaan raacin.
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, barbaarta Somaaliya ka dagaalantana maxaad wiilasha ugu dirteen? U tidhaahdeen waa Cilmaaniyiin aan caqiidoo lahayn, waa diin-laawayaal aan danta umadda wadin, waa gaalo galbeedka guryo ka wada dhisatay, waa taajiriin Tigree hosta kaga wada naban! Maanta, sow barbaartaasi (Al-shabaab) idinma soo eryin, idinma kashifin, qolalka Internetyadana kama wada sheegin waxaad ku akhriyi jirteen, qaabka aad wiilasheeniina u wada khayaanteen? Wadaadka weecdoow sidaadi ma danbaa? Yaan kaaga dacwoonaa? Maxaad noo badhi-furtay xilli aan taagannahay marxalad xasaasi ah?
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, maxaad isugu kaayo dirtay bulshadeena & Culimadoodii ay jeclaayeen? Maxaad culimada ugu camcamisay qorshe aad soo dhamaysatay, oo aysan waxba ka ogayn? Sow culimadeenu ma aha kuwo aan majliska muxaadaraadkooda u soo camiri jirnay, cajaladahooda iibsan jirnay, ehelkooda wanaajin jirnay een su’aalaha ula tagi jirnay? Madmadawga soo dhex galay culimada iyo dadkoodii maxaad ka macaashtay?
Wadaadka weecdoow, Mujahaidkii S/galbeedoow, dacwaan kuu haystaa, gar baa taala ee kaalayoo soo fadhiiso. Ma daw baa inaad halganka shacabka Maser af iyo addin ku taageerto, kii Tunisia aad Nasri ugu yeedho, midka Liibiya aad fadwooto inuu Jihaad yahay, Yemen iyo Baxrayn aad tidhaa maanta xaqa iyo baadilkaa kala baxaya, LAAKIIN kolkay qadiyadda dhex taala shacabka Muslinka ah ee shuyuukhda, sayidka, macalimiinta iyo naftood hurayaasha ku abtirsada ee haddana la dagaalamaya fircoonka geeska afrika (Melez) iyo junuudda uu samaystay iyo haamaanada u adeegayana aad tidhaa halgan ma jiree, kooxda ina hebel ayaa umada lug goynaysa? Ood tidhaa fawdaa jirta, tuug baa hawshan wadata, umaddii baa la dhaqan-fasahaadiyey iwm!
Wadaadka weecdoow, Mujahaidkii S/galbeedoow, Ilaahay baan kugu dhaariyaye, xilli ay Taangiyada Tigreegu si garbo-siman ah u soo glayaan gobolada walaalahayo Soomaaliyeed, sida Gedo, Galgaduud, Hiiraan, Dhuuso-mareeb, Beled-xaawo, Luuq iwm. Miyaad isku soo sawirtay adoo shimbir cad Melez la duulinaya? Miyaad suudh soo xidhatood Melez ku ag qososhay, miyaad mashaariic sunuud kooban ah qaddiyaddaadii siisatay? Ma waxaad ku sabirtay inaad saxaafadaha ka aflagaadayso wiilashii ku sabray soo celinta sumcadda iyo xaqa bulshada muslinka ah ee Soomaaliyeed meel walbay joogaan? Meeday muxaadaradii Axmed Gurey? Meeday qisooyinkii Sayidka eed nala daba taagnayd? Meeday nusuustii ahayd sidan iyo sidaa,,,. Oo maxaad beenta noogu sheegtay ood noo tidhi JWXO ayaa Dh/buur kula shirtay Tigre, qaddiyad-diiniina sunuud koban siisanaysa? Ma anaa waashay mise JWXO- kalaa heshiis gashay? Ma anaa faasiq rumaystay oo digniintii qur’aanka garab maray mise ,,,,, ma garanayo, Mooji! Mise anaabad wali ii cadhaysan tahay! Wadaadka weecdoow, yaan kaaga dacwoonaa?
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, ma og tahay inay bulshadeenu dhaqan ahaan tixgaliyaan waxa xissiga ah ee u muuqda, haddaad shalay masaajidda ugu yeedhay, muxaadaraad halgan iyo nusuus nasri ka hadlaysana aad ku akhrisay, maantase ay arkaan shimbiro hoggaanka Tigre lala duulinayo, xafiisyada dhoofinta xoolaha oo la wada furtay, diyaarado iyo tigidho bilaash ah ay Tigre soo direen loo wada baratamayo, sow xaq uma laha Bulshadu inay tidhaa “WADAAD DANBE WAXBA KA DHAGAYSAN MAAYO” haddaad shalay kala gaysay Culimo iyo bulshadeed, maantana sow maadan kala jabin Soomaali iyo wadaaddo? Yaan kaaga dacwonaa wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow?
Agoonka xubinka kuu ahaa ee shalay ku aaminay, xubinkana kaadirkaaga ahaa kolkaad qurbaha uga carartay eed mashruuc iyo qandaraasyo aad doonato, siduu noqon dareenkiisu? Ileen JWXO-na adigaa ku diraye!
Wadaadka weecdow iga jaahil bixi qormooyinkaaga taxanaha ah eed ugu magac dartay “Himilooyinka dacwada ee S/galbeed “. Maxaa himilo ah oo jira? Dacwadee? Goboolka kaan u dhashay een ku dhashay een ka soo cararay sow ma aha? Ma ku kalaa jira? Dhibka u weyn ee na haysta sow maha Gumaysi, walaalahayo Soomaaliyeed waxa xasuuqayana Ka na gumaysta sow maha, Jigjiga ma ka jeedin kartaa muxaadaro cinwaankeedu yahay “ Duulaanka iyo gumaadka ay Tigreegu ku qaadeen walaalaheena Somaliyeed? ma ka jeedin kartaa Muxaadaro cinwaankeedu yahay “ Gumaysigii Fircon iyo Halgankii Nabi muuse (cs)”? Haddaadan ka hadli Karin, haddee shacabka kolkii horeba abtigayba waysadu waxay ku jabot wuu bari jiray, adeerkayna furiinka iyo xeerarkiisa wuu u akhrin jiray, awoowgayna nusuusta mawliidlka suubanaha (scw) wuu u akhrin jiray, walaalkayna bisha soon iyo fadaa’isheeda ayuu ka hadli jiray. Maxaa himilo dacwo ah oo soo kordhay haddaba? Umaddu horay uga dharagsanayd duruustaa, waxayse ka liidataa u istaagga ilaalinta naftooda, diintooda, hantidooda iyo sumcaddooda, kuwaasoo la isku yidhaa “Maqaasidu shariicah”. Islaamku ma wax kaluu ilaaliyaa? Kaalaya wadaaddada weecdoow, soo fadhiista gar baa taale!
Wadaadka weecdow, mujaahidkii S/galbeedoow, waraysigaad Somalimirror siisay eed tidhi warankaan wayaanaha galinay buu la wayraxayaa, walwalkaan ku beernuu la tiihayaa , waxaa maalmo kooban ka dib xigay warsaxafaadeedkii ahaa “ Waabaa baryay bilicsan arooryo suuban maalin boqoran”. Maatadii amaanada idiin dhiibatay haddaan nahay wareernay, waxaa sii xigay “ aqoonyahanka qurbaawiga ahoow kaalaya, cahdi-qarameedkan wax ka saxiixa”. Amakaag, anfariir iyo dhabanahays baa naga soo hadhay.”
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, ma anagaa quraysh ahoo nasriga iyo malaa’igaha cirka ka soo degay aanaan arkayn mise idinkaa riyoonaya? Maxaa is beddelay? Sow kan xasuuqii iyo gumaadkii inta sal-ballaadhay sii laban-laabmay? Sow tan inta dhiiggayagu ku filnaan waayey loo sii gudbay walaaladii na dhalay ee nala dhashay ee Soomaaliyeed?
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/Galbeedoow, ma gar baa inaad maanta qoys qoys, beelo beelo iyo yaa qawmu fulaan ah shirar isdaba joog ah luggooyana ah aad Dollar ugu bixisaan, aad noo kala qaybisaan Banu andiira halganka ku badane ka soo jara iyo banu qaynu qaac baa halganka ka soo horjeeddee oday-dhaqameedyadooda la shira? Ma daw baa inaad Cabdi iley noo lug xidhaan, barnaamijkiisa gumaysi, ee gumaad ee xasuuq ee diin iyo dhaqan ka bixid oo ku iftataaxataan “Inal xamda lilaahi naxmaduhu wa nastaciin? Masraxa gabdhaha ka niikinayana aad tidhaahdaan “Maashaa allah”? oo kaalay, sow idinkii wiilashan JWXO la yidhaa ku sifayn jiray rag dhaqan xun? Idan “Lima taquuluun, maalaa tafcaluun”?
Wadaadka weecoodoow, Mujaahidikii S/galbeedoow, meeye halyeeyadii Habeenkii Halooye? Qaa’iddadii maalinkii Qorro? Kun ka roonayaashii hawlgalkii Kabtinaag? Geesiyaashii Yeed? Meeye raggii Saliid galay? Maxsuulka laga dhaxlay dhiiggii iyo dhaawicii iyo agoontii Halyeeyada ma waxaa lagu baddashay in umadda maanta qaaciddadii fircooniga ahayd “Kala qaybi oo xukun” loogu lug xidho Melez? Sow Melez ma odhan reer hebel baa ila dagaalama, reer hebelna waa ila heshiis, reer hebelna ismaba naqaan?
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, wiilasha maanta ay kuwa jamhuuriyaddii soomaaliya kala goosgoostay ay gees ka wada mareen, raggooda & wiilashoodana indho-duubka ugu xidhaan Melez, una soo gacan geliyaan, maantana ay Jabuuti ugu darsantay ee waxa kaliya ay u dhimanayaan ay tahay “Soo celinta xaqa iyo sharafta umaddaa soomaaliyeed ee qabiil walba leh ee lagu gumaysto gobolka ay Ethiopia xoogga ku haysato” miyaad ugu darsanteen inaad Al jazeera, VOA, BBC iyo saxaafaadka ka sumcad dishaan? Kaalaya soo fadhiista gar baa taalee!
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, damiirkaagu ma wuxuu ku siiyey inaad ka mid noqoto saraakiisha ciidanka gumaysigu samaystay (Liyuu Police) ood duulaan u aaddo Gedo, Luuq, Beled-xaawo si aad u soo xasuuqdaan muslimiin Soomaali ah? Mise Fatwaa arinkaa ka taaloo waxaad leedahay waa Ta’wiil uu mujtahid sameeyey maadaama aan Ethiopian nahay masaaliixda guudna in loo wada shaqeeyo waa maqaasidu shareecah? Miyaan khaldanahay haddaan ku idhaa waxaad tahay “Dan-jire Tigre”, dhib uma aragno hadday kolkaa JWXO-na ku sifowdo jabhad ay wax ka khaldan yihiin.
Wadaadka weecdoow, Mujaahidkii S/galbeedoow, halgankii Axmed Gurey ee caalamka gilgilay, Kii ina Cabdille Xassan ee matxafyada ku xardhan, kii Soomaali-galbeed ee kumanaanka dhiig loo qubay, waxaad ku soo gunaanadday shimbir cad oo la duuliyo, laysanka dhoofinta xoolaha oo la qaato, boosaska muwaaddiniinta xabsiyada lagu guray oo lagu siiyo, waxaanse kaaga tagay Wadaadoow weecatay, Mujaahidkii galbeedoow gablantay gabalkaana dhac!